UTshazimpuzi. Ukukhethwa kwezinto ezintsha | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | 01/04/2022 12:00 | Ukuhlaziywa ukuba 25/03/2022 11:52 | Iincwadi, Inoveli, Inoveli emnyama
Epreli Ivula ngendlela enkulu kunye nothotho lwezinto ezintsha ezibizwa kwimpumelelo. Sinentsha USantiago Posteguillo, uFélix G. Modroño, uMari Pau Domínguez kunye noRigoberta Bandini ngokwemathiriyeli yesizwe, kunye UJo Nesbo kunye noDon Winslow, eyayilibaziseke, kumazwe ngamazwe.
1 NdingumRoma-Santiago Posteguillo
2 Ilanga lamagqwirha - Félix G. Modroño
3 Indoda Enomona - Jo Nesbø
4 Akusayi kubakho mthombo ungomnye - iMari Pau Domínguez
6 IsiXeko sisemlilweni-uDon Winslow
IRoma ndim - Santiago Posteguillo
Yonke into iPosteguillo ibhalayo ijika ibe yigolide ngokukhawuleza ukuba ifike kwiivenkile zeencwadi, kwaye kuya kwenzeka okufanayo ngesi sihloko sitsha. Kwaye kukuba emva kokuchukumisa ubomi kunye nemisebenzi yabalinganiswa abafanelekileyo kwiMbali yaseRoma kunye neetrilogies zakhe Scipio, UTrajan o ujulia domna, umfazi woMlawuli uSeptimius Severus, kwakunokwenzeka njani ukuba umntu angabi kunye mhlawumbi noyena mntu ubalaseleyo nowayesaziwa kakhulu ngelo xesha?
Ngoko sibuyela ku eRoma, ukuya kutsho kunyaka wama-77 a. C, xa i USenator Dolabella uya kugwetywa ngu rhwaphilizo, kodwa uye waqesha awona magqwetha abalaseleyo, uye wathenga inkundla yabagwebi yaye, ukongezelela, akalibazisi ukusebenzisa ugonyamelo kubo bonke abachasi bakhe. Le yindlela izinto akukho mntu ufuna ukuba mali, kodwa ngokungalindelekanga upatrician oselula uyayamkela umngeni wokukhusela abantu baseRoma kunye nokucela umngeni kumandla aphezulu. Imalunga ne uGayo Julius Caesar.
Ukusuka apho, kwaye ngokuqinisekileyo kwakhona ngobuchule obubonisa umbhali waseValencian ukwenza kwakhona i Indalo yonke yembali engqongqo kunye nokubalisa okukhulu, siya kungena kobo bomi bukaJulius Caesar obuqhubeka bubangela imincili kungakhathaliseki ukuba baziwa kangakanani na.
ilanga gqwirha - Felix G. Modrono
Umbhali waseBiscayan usithatha Cantabria ukuphengulula kudidi lwenoir ngeli bali apho a umzimba wentombazana ubonakala ujinga yeStone Crane eSantander Bay. Umlomo wakhe uvaliwe kwaye izandla zakhe zigqunywe ngeyasuyasu kwaye, ngenxa yeyunifomu ayinxibileyo, i Umhloli uAlonso Ceballos, igqala lamapolisa aseSantander, kunye ne USekela-Mhloli uSilvia Martin, iarhente esandula kufika evela ePalencia, iya kuphanda isikolo elitist Peñas Viejas. Ngokukhawuleza banxulumanisa eli tyala nokubhubha komnye umfundi kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, nangona oko kwavalwa njengokuzibulala. Njengoko bephanda, amacebo avela apho mafia, i ukuxhatshazwa kunye neekona ezimnyama ngakumbi ze nomphakathi.
indoda enomona -UJo Nesbø
Akukho nyaka ngaphandle kwebali elitsha le-Jo Nesbø, nangona kule meko banjalo Amabali ama-12 efika ngoku emva kokupapashwa kulo nyaka uphelileyo kurhwebo lwamazwe ngamazwe. Ugqiba iminyaka engama-62, umbhali owaziwa kakhulu waseNorway wohlobo lwe-noir, apho aqhubeka khona ukulawula (Ubukumkani), isibonisa kula mabali ukuze a umcebisi ingcaphephe yomona ekufuneka izingele indoda ekurhaneleka ukuba ibulele umninawa wayo. Kukho kwakhona a ubawo abaxhwalekileyo bezibuza ukuba yintoni na indawo yokuziphindezela kuluntu oluye lwanikezela kwezona mvakalelo ziphantsi. KUNYE Izihlobo ezimbini owathi, endleleni eya eSanfermines ePamplona, ​​wathandana nentombazana enye. Okanye ibali lika indawo yokulahla inkunkuma ukuba, ngelixa echacha kwi-hangover enzulu, kufuneka afumanise ukuba yintoni kanye eyenzekayo ngobusuku obungaphambili, kwaye oko abakhweli ababini kwinqwelomoya phakathi apho kuvela intlantsi yothando... okanye mhlawumbi imvakalelo embi ngakumbi.
Akusayi kubakho mthombo wumbi - UMari Pau Dominguez
Intatheli kunye nombhali uMari Pau Domínguez wabhala iinoveli ubomi bukaCarmen de IcazaEnye ye ababhali abafunde kakhulu ababhinqileyo beminyaka yee-XNUMXs ezidlulileyo. Inoveli yakhe UCristina Guzmán, utitshala wolwimi yaguqulelwa kuzo zonke iilwimi zaseYurophu. Kodwa wayengengombhali weencwadi nje owaziwayo. Wayengowoluntu oluphezulu, yaye emva kokufa kukayise waqalisa ukusebenza njengomfundisi intatheli ukuze baxhase abazalwana babo abancinane. Yaba yenye ye abaseki boNcedo lweNtlalo ngexesha leMfazwe yombango, nangona yacela umngeni kwi-postulates yeCandelo labaseTyhini. Kamva waxelela umtshana wakhe, uCarmen Díez de Rivera, intombi kadadewabo uSonsoles kunye noRamón Serrano Suñer, owayenguyise wokwenene.
KuRigoberta Bandini-guqula i-ego ye UPaula Ribo, owazalelwa e-Barcelona ngo-1990- yaziwa ngokuba yi- isenzeko samva nje kwindawo yomculo, kodwa ukwangumdlali we-actress, ukwangu-dubbing (ubize abalinganiswa abafana noCaillou noChihiro), imvumi, umlawuli wedrama kunye nombhali.
Kule ncwadi ukuzichaza thetha ngomntu wokuqala ngaye ingxaki yokubaphakathi kweminyaka kwaye, phambi kwakhe, usazisa kumfazi othatha isigqibo sokutshintsha ubomi bakhe kwaye aqalise uhambo lokuzazi apho axhuma khona kwi-void kunye ne-vertigo esinayo ngexesha elithile yinto esiya kuthi sonke sihambe ngayo ngokukhawuleza okanye kamva. Umbhali uchonga iimvakalelo zomlinganiswa oyintloko, kodwa uninzi lweeanecdotes azixelelayo ziyayilwa.
Esi sihloko soMntla waseMelika kudala sifika, kuba yabhengezwa ngoSeptemba wonyaka ophelileyo. Sisenayo incasa ye Yophukile kwaye ngoku bonisa oku Isixeko esivuthayo, ethembisa ukuba yingoma yeshumi elinesibini kumbhali olandelwa kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » UTshazimpuzi. Ukukhethwa kwezinto ezintsha